သင်၏အသက်တာအတူတူပင်ဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟု သိ. ကြယ်အကြောင်းကို 17 အရူးအချက်အလက်များ,!
သင်တို့ရှိသမျှသည်-All-အားလုံးနှင့်သူတို့ခွင့်ပြုထက် ပို. ပင်၏သင်အကြိုက်ဆုံးကြယ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းထင်ကြသလော ကောင်းပြီ, ကောင်းစွာ ...
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မသိရ, ဤအချက်အထိ 17 တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်တရားဝင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ၌တွေ့ကြသည်မဟုတ်သည့်အလွန်အရူးနှင့်အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်များ, ဒါပေမယ့်နာမည်ကြီးတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့အတည်ပြုခဲ့သည်ရှိသည်သောများ၏အမှန်တရား။ တိုတောင်းသောများတွင်နေထိုင်ရန် - သင့်ကမ္ဘာ၏မိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ...
2005 ခုနှစ်တွင် 1. Benedict Cumberbatch, ပြပွဲ၏ရိုက်ကူးရေးအတွက်တောင်အာဖရိကမှာရိုက်ကူးခဲ့သည့်နေရာများတွင်အများစုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ သင်က (scripted မဟုတ်!) အဲဒီမှာယုံကြည်ပေမယ့်မည်မဟုတ်ခြောက်လလက်နက်ကိုင်ဒမြပြန်ပေးဆွဲ!
2. Justin Timberlake ရဲ့မိခင်မင်းသား၏ဇာတိမိခင်ကနေဒါအိမ်မှာနေဖို့နဲ့ငွေရှာရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က, «အဆိုပါ Mickey Mouse ကိုကလပ်»အတွက်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည့်အချိန်၌ရိုင်ယန် Gosling ၏ဥပဒေရေးရာအုပ်ထိန်းသူပဲ!
စကားမစပ် 3. ကိုသင်သိရိုင်ယန် Gosling နဲ့တူ "ဒီ Notebook" အတွက်သတ္တုများပုံသွန်းလမ်းလျှောက်? ဒါဟာဒါရိုက်တာအလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်မမှာအားလုံးအေးမြတောမဟုတ်သူတစ်ဦးဦးလိုအပ်ကြောင်းထွက်လှည့်!
4. သင်စိတ်ကူးနိုင်သလား, ဒါပေမယ့် 1978 ခုနှစ်ကအပေါငျးတို့သအကြိုက်ဆုံးဒစ္စနေးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တိ Allen က၏အဓိက Santa Claus, ကင်း၏ 700 ဂရမ်အပိုင်မီချီဂန်အတွက်လေဆိပ်မှာအဖမ်းခံရတယ်!
5. ယခုမှာယေဘုယျအားဖြင့်ကျင်းပရန် - ယခု Oprah Winfrey ၏နာမတော်ကိုအမှန်တကယ်သြရပ! အခြားကိစ္စရပ်များအတွက်တီဗီဖုံးကွယ်မထားဘူးရသောသူမ၏မွေးစာရင်း, တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအတိအကျကဘာလဲ!
6. အဘယ်သူသည် "ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှု" ဟုအဆိုပါတီဗီစီးရီးအတွက်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးသဘင်၏ဘဝအသက်တာကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟု "လူသတ်မှု, သူမသည်ရေးသားခဲ့သူ" ထင်ကြမလဲ? ဒါဟာသူမ၏သမီးချားလ်စ် Manson နဲ့သူ့သား၏ "မိသားစု" ၏ဂိုဏ်းမူးယစ်ဆေးစွဲဆက်သွယ်မေးမြန်းရာပြီးနောက် Angela Lansbury ကိုတောင်ကယ်ဖို့အိုင်ယာလန်မှသူ့မိသားစုကိုရွှေ့ခဲ့ကြောင်းထွက်လှည့်!
Sarah Jessica Parker တို့အလယ်ခေတ်အတွင်းလမ်စုန်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်နေရာ ယူ. , ဒါပေမဲ့ကျဉ်းမြောင်းရှယ်ယာမှာမီးလောင်သောထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သောအချို့ဧသတာ Ervell ၏နာမကိုအမှီတင်ပြမင်းသမီး၏မိသားစုသစ်ပင်အတွက် - သင်အတိအကျမသိရပါဘူးဒါက 7. !
8. Wow - သရုပ်ဆောင်ရော်ဘင်ဝီလျံသူမ၏ပြီးနောက်နှင့်ပင်သူ၏သမီးအမည်ရှိသော "Zelda ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ" ဟုအဆိုပါဗီဒီယိုဂိမ်း၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောပန်ကာပဲ!
တစ်ဦးသရုပ်ဆောင်, Jason Statham 12 နှစ်ဖြစ်လာခင်မှာ 9. (!) ရေငုပ်အတွက်ဗြိတိန်အမျိုးသားရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရှိခဲ့!
10. အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ညာဘက်ရှေ့သွား Tom Cruise နဲ့သူ၏မျက်နှာရဲ့အလယ်၌တရားကြောင်းကိုသတိပြုမိပြီမဟုတ်လော
11. ဒါပေမယ့်စူပါ Gisele Bundchen သူ၏ namesake နှင့်ခင်ပွန်း - quarterback '' မျိုးချစ် '' တွမ် Brady အဖွဲ့စတော်ဘယ်ရီကိုစားခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာသူပဲချင်တယ်သို့မဟုတ်ထားပြီးပယောဂကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့တာလဲ
12. ဘာရှုပ်ကသရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာ Woody Harrelson သာအသက်ခုနစ်နှစ်လှညျ့သောအခါ, သူ့ဖခင်ချားလ်စ်လူသတ်မှုများအတွက်အကျဉ်းချခံခဲ့ရပုံပေါ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, 10 နှစ်ကြာကံပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကသူ့အရေးယူထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ချက်ချင်းနှစ်ခုဘဝစာကြောင်းတယ်!
ဇနီးနဲ့ Sarah Jessica Parker ၏အကောင့်ပေါ် 13. နှစ်ဦးသေဆုံးမှု - အခြားသို့ပျက်ကျခဲ့သည့်အခါကားကိုမောင်းနှင်ခဲ့သူသရုပ်ဆောင်နှင့်ဒါရိုက်တာမဿဲ Broderick ...
16 ကြိမ်မြောက်အမေရိကန်သမ္မတလင်ကွန်း - 14 ဒါဟာ Tom Hanks နဲ့ George Clooney မင်းသားရဲ့ယာဉ်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုအဖိုးအခ, ဒါပေမယ့်လည်းဘုံဘိုးဘွားသာစည်းလုံးညီညွတ်ဖြစ်ကြောင်းထွက်လှည့်!
15. ရုံကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း - မာကု Wahlberg သုံးနို့သီးခေါင်း!
16. ထိုအဟယ်ရီ Styles လေးရှိသည်!
17. ထိုကိတ်မုန့်ပေါ်မှာငါတို့ချယ်ရီ - သင်ကသရုပ်ဆောင်ရစ်ချတ် Gere ၏အဘယ်အရာကိုဒုတိယနာမကိုသိ? Tiffany! ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ...
အချိန်ကြာမြင့်စွာအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကလေးများနှင့်အတူရိုင်ယန် Gosling နှင့်အီဗာ Mende အဆိုပါ paparazzi မျက်ကပ်မှန်သို့ကျဆင်း
ဂျော့ခ်ျနဲ့ Amal Clooney Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီ၏မင်္ဂလာဆောင်တက်ရောက်ခဲ့သည်
အဆိုပါအနုပညာရှင်နာမည်ကြီး Toon ဇာတ်ကောင်ဖျောနှငျ့သငျသူတို့၏မျက်စိမှပယ်မလာကြဘူး!
သောအတိတ်ကာလ 20 ကြယ် - တစ်စိတ်ရောဂါဆေးခန်းလူနာ
နိုင်ငံရေးအတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသားအမျိုးသမီးများ
ဒါဟာထိတ်လန့်သည်: အဆိုပါနှစ်ချုပ်စာအုပ်ကနေနာမည်ကြီးတွေ 30 ဓါတ်ပုံ
ဘိုးဘေးတို့သ-အပေါင်းအဘော်: တစ်ဦးတည်းကသူတို့ကလေးတွေပြုစုပျိုးထောင် 10 စတားအဖေ
မည်သို့ 13 နှစ်များအတွက်စီးရီး "ကျနော့်မျှတသောတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့" ၏သရုပ်ဆောင်များကိုခဲ့သလဲ
Childfree စတား: ဆန္ဒအလျောက်ကလေးများရှိသည်ဖို့ငြင်းပယ်သော 10 နာမည်ကြီးတွေ
35 cutest ဓါတ်ပုံတွေကိုမင်းသားဂျော့ခ်ျနှင့်မင်းသမီး Charlotte
အခန်းကဏ္ဍအရအပိုပေါင်ရရှိခဲ့ကြသူ 10 ဦးနာမည်ကြီးတွေ
ကြမ်းပြင်မျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလဲကြသူ 30 ကိုအများဆုံးရဲရင့်သရုပ်ဆောင်များကို
Irreparable အရှုံး: 2016 အတွက်မဟုတ်ခဲ့သည့် Celebrity,
ငါ tanning ပြီးနောက်ကိုလျှော်နိုင်သလား?
Provence ရဲ့ style အတွက် Wardrobe
သတ္တု partitions ကို
မျက်စိ Emoksipin ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်
Cystitis အတွက် Cranberry သီးဖျော်ရည်
ကကြောင်အတွက် estrus စတင်လာတဲ့အခါ?
ဆံပင် barrette နှင့်အတူ Hairstyle
ယုန်၏ viral haemorrhagic ရောဂါ
ဟာမ - ကယ်လိုရီ